I-Tiger Woods Biography kunye nezibalo zeGolf
I-Tiger Woods ngokuqinisekileyo i-golfer enkulu kunazo zonke, kwaye ngokungenakufaneka enye yeyona nto iphezulu kakhulu. "I-Tiger Impact" yavuya kakhulu, ikhuphe iipaki zeePGA zeeNdleko kwaye zaphakamisa izilinganiso zeTV eziqala ngo-1996, xa ephendulela.
Umhla wokuzalwa: uMhla wama-30, 1975
Indawo yokuzalwa: Cypress, California
Isiteketiso: I- Tiger, kunjalo. Igama lakhe elibizwa ngu- Eldrick . (Unayo izina lomnxeba , nangona kunjalo.)
Ukutshatyalaliswa kwePGA Tour:
( Jonga uluhlu olupheleleyo lweentambo ezithatyathwa yi-Woods )
I-British Open: 2000, 2005, 2006
I-PGA Championship: 1999, 2000, 2006, 2007
( Funda ngokubanzi ngerekhodi likaTiger kwii-majors )
US Amateur: 1994, 1995, 1996
Amabhaso kunye neMbeko kwiTiger Woods
Umlawuli we-PGA we-Tour, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2002, 2005, 2006, 2007, 2009, 2013
I-PGA Vardon iTrophy winner (i-average score score), 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2013
I-PGA Tour Player yonyaka, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2013
IiGolfer ezininzi zeNyaka kunye neNgcaciso ye-Athleti yonyaka, ubuyela kwiintsuku zakhe zokutsala
Ilungu leQela likaMongameli we-US, 1998, 2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013
Ilungu leqela le-US Ryder Cup, 1997, 1999, 2002, 2004, 2006, 2010, 2010
Isampulu zeengcaphuno ezivela kwi-Woods:
"Nsuku zonke kwikhosi yegalufu ngokuphathelele ukwenza utshintsho oluncinane, ukuthatha oko unokufumana ngaloo mini uze ufumane indlela yokujongana nayo."
"Kungakhathaliseki ukuba uyifumene kangakanani (kwigorfu), unokuhlala ulunge.
"Igalofu kum andiyonto into endiyenzayo. Ndiyayithanda le mdlalo. Yifana neziyobisi kufuneka ndibe nayo."
"Unyaka obalaseleyo wobomi bam, xa ndandineminyaka engama-11. Ndaqonda ngqo, Njengoko, ngaba neefestile ezimbini ngosuku kunye ne-girlfriend ye-32.
ITiger Woods Trivia
I-Tiger Woods yaba ngumncinci kunabo bonke abaphumelele kwi- career slam ngo-2000, eneminyaka engama-25 ubudala, xa ephumelele i-British Open.
Ngowe-1997, uTiger Woods waba ngumncinci we-Masters kuneminyaka engama-21 ubudala, inyanga ezintathu kunye neentsuku ezili-14.
I-Woods yayinomncinci (15) owake waphawula i-US Junior Amateur kunye nomncinci (18) ukuphumelela i-Amateur yase-US.
I-Woods ngoku iphakamisa okwesibini kwi- PGA Tour yokuncedisa uluhlu kunye ne-79, kwaye yesibini kwinqanaba elincinci le-14.
I-Woods iholele i-PGA Tour ekuphumeleleni kwiminyaka engama-12 eyahlukeneyo; akukho golfu eyenzile ngaphezu kweminyaka emithandathu.
I-Woods ine-10 ye-PGA yexesha lokutyelela ngeentsuku ezintlanu okanye ngaphezulu, kwakhona kwirekhodi yokutyelela.
I-Biography ye-Tiger Woods
Ihlabathi lingakaze libone i-golfer eyithandwa yiTiger Woods: i-golfer ebushushu bayo obunomdla kunye nokuxhaphazwa kwezilwanyana ezilandelelweyo zilandelwa ngokunyanzeliswa ngokulinganayo.
Izinkuni zazixelisa uyise wegalufa ehamba ngeenyanga ezili-6, ngelixa esesesikhwameni sakhe. Xa wayeneminyaka emi-2, wabonakala kuMike Douglas Show waza wabekwa noBob Hope. Xa eneminyaka engama-3, watyhola ama-48 ngenxa yezimbobo ezithoba, kwaye eneminyaka emi-5 wayebonakaliswe kwiGolf Digest .
Kwaye ke izinto ezakhayo zaqala. I-Woods yanqoba umqhudelwano we-Optimist International Junior ngezihlandlo ezithandathu, ukususela kwiminyaka eyi-8.
Waphumelela abathathu base-US Junior Amateurs, owokuqala ukwenza oko. Isiqalo sakhe sokuqala kwiintetho ezilandeleleneyo zase-US ezilandelelweyo zafika ngo-1994. I-Woods yadlala iminyaka emibini kwikholeji yaseYunivesithi yaseStanford .
Uphendulele ekupheleni kwehlobo le-1996 waza wadlala iikholeji ezisixhenxe kwi- PGA Tour , efuna ukugqiba kwi-Top 125 ngemali ukuze ugweme ukuhamba nge-Q-School. Izinkuni zanqoba kabili kwaye zithumela ezintlanu ezilandelelanayo eziphezulu ze-Top 5.
Ngomnyaka we-1997, wawuthatha uMasters ngowokuqala. I-Woods yanqoba kanye kuphela ngo-1998, kodwa ngowama-1999 waqala umtya woMdlali weMigangatho wonyaka ongapheliyo uVijay Singh unqobile isihloko ngo-2004.
Waphumelela ngamaxesha asibhozo ngo-1999, emva kwexesha elinesithoba elinesibini ngo-2000. Ixesha le-Woods '2000 linye yeyona nto ibhetele kakhulu kwi-PGA Tour: Waba yinto yesibini ye-golfer yokuphumelela abadlali abathathu bobugcisa ngomnyaka owodwa waza waphula u- Byron Nelson ngaphezu kwe- Irekhodi eliqhelekileyo lokulinganisa iminyaka eli-50.
Ngowe-2001, xa ephumelele uMasters, i-Woods yaba yi-golfer yokuqala yokubamba bonke abane abanezakhono zobugcisa ngexesha elifanayo, oko kwabizwa ngokuba yi "Tiger Slam."
Ngesinye isikhathi, i-Woods ibanjwe okanye yabelana ngerekhodi kumanqaku aphantsi ngokubhekisele kuzo kuzo zonke ezine ezinezakhono zobugcisa. Unqobile i- US Vula nge-stroke ezili-15, ii-Masters ezi-12 kunye ne- British Open kwiimivimbo ezisibhozo.
Inguqu ye-swing yanciphisa ukuphumelela kwakhe ngo-2004, kwaye i- record record yayo yezohlwayo ezilandelelanayo zaphela ngo-142 ngo-2005. Kodwa wakhwela ngeentloko ezimbini ngo-2005.
Izinkuni zathatha iinyanga ezimbalwa ngo-2006 emva kokufa kukayise, kwaye zalahleka ukusikwa ekubuyeni kwakhe kwi-US Open. Kodwa ke wayinqoba ezi zimbini ezilandelayo kwaye aphinde aphumelele kwimpumelelo kwii-tournaments ezisibhozo ezalidlalayo.
Ngo-2008, i-Woods yaphumelela ukunqoba okuphawulekayo kwi-US Open, yabonisa ukuba wayedlala nge-ACL eneenkcenkcesha kunye nokuphuka komlenze wakhe. Waqalwa ngokukhawuleza emva koko walahleka kwiinyanga ezisibhozo ezizayo. Umqhubi we- WGC we-Accenture Match Play Championship wonyaka we- 2009 ukhishwe ukubuyela kwakhe.
Ukholo lwegolfu kunye nobomi bomntu apho uphonswe khona ekupheleni konyaka ka-2009, nangona, xa i-Woods ibandakanyeka engozini ye-1 engaphandle kwendlu yakhe yaseFlorida eyayiqala iqela lezinto ezikhokelela kuye ekucebiseni ukuxhatshazwa ngokwesini, ukutyhilwa kwezinto ezininzi i-mistress, kunye nokuqhawula umfazi uElin Nordegren . (Ngaphambi kokuba baqhawule, uTiger no-Elin babenabantwana ababini, intombi egama linguSam kunye nendodana egama linguCharlie .) Kwizithende zaloo nto, i-Woods yayinexesha lokuqala elingenamsebenzi njengengcali ngo-2010.
I-Woods yaphinda iphumelele kwimicimbi yezokhenketho ngo-2011, kodwa yaphumelela i-Chevron World Challenge yayo ekupheleni konyaka. Ekugqibeleni wabuyela kwisangqa somqhubi wePGA Tour nge-5-shot shot at 2012 Arnold Palmer Invitational.
Ngomhla ka-2013, waphumelela u-Arnold Palmer Ukumema kwakhona, ngexesha lesibhozo, ukudibanisa irekhodi likaSam Samne ye-winning.
Kodwa iingxaki zokulimala, kubandakanya ukuhlinzwa kwangasemva, i-Woods ephazamisekile ngo-2014 kunye no-2015, ekhokelela kwixesha elibini lezona zihlandlo ezigqithisileyo. (Jonga: Unobungozi obuninzi kunye noKugqithisa kweTiger Woods ) Wayephosa yonke i-2016 ye-PGA Tour yexesha ngaphambi kokuba aqhutywe olunye uphando emva kowe-2017.
Phakathi nango-2017, i-Woods yadotshwa ngamapolisa eFlorida phakathi kobusuku kwaye yabanjwa kwii-charge ze-DUI. Iimvavanyo ze-Breathalyzer zazingabonakali zibonakaliso zotywala; I-Woods yathi wayeneempendulo ezimbi kumachiza ogqirha. Kwiiveki ezimbalwa kamva, uTous kuthiwa wazihlola kwindawo yokunyangwa kweziyobisi ukujongana nokuxhomekeka kwiintlungu ezibangelwa ukulimala kwakhe.
Ukuphuma kwikhosi, i-Woods iye yaqalisa iqela le-golf design company. Washicilela incwadi yokufundisa igolfu ebizwa ngokuba I-Play I Play Golf (yithenga kwi-Amazon). Kwaye iSiseko seTiger Woods, esasungulwa nguThomas kunye noyise ngo-1996, siphakamise izigidigidi zeedola ukunceda ulutsha olungaphantsi luqalise kwigalofu kwaye luphumelele ebomini. Uphinde wasungula ishishini loyilo lwegalufa.
Okungakumbi kwi-FAQ yeTiger Woods
Le nkcazo emfutshane ye-Woods inikezela ngokugqithiseleyo umsebenzi wakhe wegalufa kunye neembalo ezimbalwa ngobomi bakhe.
Ukufumana okungakumbi - iprofayili yomama wakhe, enkulu ye-yacht kunye nendlu enkulu , kutheni enxibe iikhati ebomvu ekujikelezweni kokugqibela, izixhobo zakhe kunye nokuvumela , kunye nokunye, ngakumbi - bona iTiger Woods FAQ .
Iimpawu ezigqwesileyo kunye nezibi kakhulu zeTiger Woods njengePro kwiPGA Tour
UJimmy Demaret: I-Golfer ebonakalayo, i-3-Time Masters Champ
Hlangana neMeg Mallon, iLPGA Hall of Fame I-Golfer
Indlu kaTiger yeThuni kunye ne-Backyard Practice Facility
Elula kunye neeNkqubela phambili
Intsiba yeAnatomy kunye neMisebenzi
Ubungqina Buthathu Emnye?
Ukuguqulwa kweMelika: Ukuthathwa kwe-Fort Ticonderoga
Iingcebiso ze-Skiing Tips
Funda ngeentlobo ezintathu zezobuGcisa kunye nezobuChwepheshe
Ngaba uAbraham Lincoln wayeyindoda?
Yenza Yakho Iintsuku ezili-12 zeNcwadi yeMbala yokuKrisimesi
Iprofayili ye-Shoegaze Music
Inkcazo ye-Electrolyte eqinile kunye nemizekelo
Kutheni iMathematika iLwimi
2014 I-Wrestling yoBugcisa i-PPV I-Recaps kunye neziphumo
UMTHETHO Ulinganisa Ukwamkelwa kwiikholeji eziphezulu zaseTennessee